Sharaxaad iyo Falanqeyn Go’aankii Maxkamadda ICJ | KEYDMEDIA ONLINE
29 January 2022 Ganacsatadda Bakaaraha oo lagu qasbay in ay furaan ganacsigii xirnaa
29 January 2022 Safiirka cusub ee Mareykanka oo qaadey tallaabadii ugu horeysay
29 January 2022 Ciidamo lagu weeraray inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Balcad
29 January 2022 HirShabeelle oo ka hor-timid amarka RW Rooble
29 January 2022 Qarax ka dhacay Muqdisho iyo Wararkii ugu dambeeyay
29 January 2022 Waa sidee Xaaladda Beledweyne?
29 January 2022 Lafta-Gareen oo doorasho ku qabanaya Baraawe
28 January 2022 Shil gaari oo ka dhacay gobolka Nugaal
28 January 2022 Al-Shabaab oo xukun ku fulisay askar ka tirsanayd DF
Kenya waxay horey u diiday inay u hogaansanto go'aanka Maxkamadda ICJ ee ku saabsan kiiska badda, oo mudo 7 sano la sugayay.
MUQDISHO, Soomaaliya - ICJ ayaa go'aan aan rafcaan lahayn ka gaartay kiiskii dacwadda badda, ayada oo diiday doodaha Kenya ee ahaa inuu jiro xad u dhexeeya labada dal oo la barbar ah xariiqa loolka.
Go’aanka Maxkamadda qodobada ugu waaweyn waxaa kamid ah:
Fiqi: Bakaaraha wuxuu u xirnaa Askar katirsan NISA oo dharka bedeshay
Warar 29 January 2022 13:46
Saddex maalmood lama furin qeybta lagu iibiyo qalabka dhismaha ee ku teedsan Jid-Mareexaanka, waxaana arintaas ka hadashay dowladda Soomaaliya.
Dacwo ka dhan ah Farmaajo oo loo gudbiyay ICC
MW Waare: Farmaajo firimbi dagaal qabiil ayuu iclaamiyay